Waa kuma xiddiga buuxin doona booska uu ka maqan yahay Sergio Ramos kulanka Real Madrid ay booqanayso Manchester City? – Gool FM
Haaruun August 5, 2020
(Madrid) 05 Agoosto 2020. Waxaa la sii shaaciyey xiddiga booxin doona booska uu ka maqan yahay Kabtanka Real Madrid ee Sergio Ramos kulanka ay booqanayaan Kooxda Manchester City ee Champions League.
Sergio Ramos ayaa ganaax ku seegaya kulanka kooxdiisa Real Madrid ay wajahayso Manchester City, waxaana booska uu ka maqan yahay kabtanka dabooli doona Eder Militao kulanka ka dhacaya garoonka Etihad.
Los Blancos ayaa doonaysa inay ciyaarta dhinac kale u rogto maadaama lugtii hore ee ka dhacday garoonkooda Santiago Bernabeu ay guuldarro 2-1 kala kulmeen Man City, si ay u jartaan tikidhkooda kulammada ugu dambeeya Champions League ee ka dhacaya Magaalada Lisbon.
Si taas ay u sameeyaan, waxay u baahan doonaan inay difaacooda adkeeyaan oo ay ka dhigaan mid xasilloon, waxaana hadda ay go’aansadeen inay daafaca dhexe ee kulankaas ka wada ciyaarsiiyaan Raphael Varane iyo Militao si ay uga caawiyeen goolhaye Thibaut Courtois inaan gool laga dhalin.
Xiddiga reer Brazil ayaa Los Blancos kaga soo biiray Porto xagaagii hore kaddib markii ay soo siisteen 50 milyan oo euro si uu u daboolo Ramos ama Varane markii loo baahdo.
Waa la gaaray waqtigii uu ku ciyaari lahaa, laakiin Real Madrid ma dareemi doontaa nabadgelyo marka uu Militao daafaca dhexe uga ciyaarayo kulanka ay la dheelayaan Manchester City?.
Kooxda AC Milan oo xaqiijisay inay Wadahadallo kula jirtay xiddiga Tottenham ee Serge Aurier... (Halkee ayay hadda mareysaa arrintaas?)